घर युरोपियन स्टार ओलिभर गिराद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "आकर्षण स्ट्राइकर"। हाम्रो ओलीवियर Giroud बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहिले हाम्रो ओल्लियर गिरोह जीवनीलाई बुझ्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
ओलिभर गिरोद चेम्बररी, दक्षिण-पूर्वी फ्रान्समा सितम्बर 30 को 1986th दिनको जन्म भएको थियो।
आफ्नो बचपन (दाँया6देखि दाँया) देखि, उनी आफ्नो बुबा भाइ, रोमानिन Giroud को लागि फुटबल धन्यवाद को बारे मा भावुक भए 10 वर्ष उहाँका वरिष्ठ।
ओलिभर आफ्नो क्यारियर सुरू गर्नु अघि समेत विफलताको डर संग जोडिएको थियो। यो भयो जब उनले आफ्नो भाइको करियरको अचानक अन्त्य देखाए। तिनको भाइले फुटबल छोड्न निर्णय लिने पोषण विशेषज्ञ बनेको छ। रोमनले राम्रो उदाहरण सेट गर्न असफल भएकोमा आमाबाबुलाई निराश बनायो।
के क्यारियर डरबाटै, सानो ओलिभर पनि 1980s कमेडी क्यारेक्टरबाट डराएको थियो 'Alf' जब उनी एक जवान थिए। एक पटक तिनले आफ्ना वृद्ध भाइहरूलाई नियमित रूपमा उनीहरूलाई धेरै मनपर्ने sitcom ताराको डरबारे उनीहरूलाई तान्ने कसरी प्रयोग गरे भनेर कुरा गरे।
एल्फको अनुकूल व्यक्तिको बावजूद, जवान ओलिभरले प्राणीको हेरचाह स्वभावमा रुचि राखेनन्।
जब उनले सबै भन्दा डरलाग्दो कुरा सोधे, गिरोदले भने: 'मेरो भाइले मलाई एल्फ नामक टिभि क्यारेक्टरको बारेमा चिन्ता गर्न प्रयोग गरिरहेको थियो। म तिनको धेरै डरलाग्दो थियो किनभने उहाँ अत्यन्तै बदसूरत हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाइले भन्नु भएको थियो, सावधान रहनुहोस्, अल्फ आज तपाईलाई आउनेछ! ' उहाँ यसको साथ धेरै टाढा जानु भयो!
धेरै प्रेरणात्मक सल्लाह पछि, जवान ओलिभरले फुटबल प्रयास गर्ने निर्णय गरे। यो उनीहरूले हराएको महिमा फिर्ता आफ्नो परिवारमा फर्केर आउनु भएको थियो जसलाई एक पटक मानिन्छ "फुटबलका परिवार"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
ओलिभर गिरोउ को नजिकै ग्रेनोबल नजिकै नजिकै फ्र्रोज मा उठाइएको थियो। उनले आफ्नो गृहनगर क्लब, ओलम्पिक क्लब डे फ्रोजको लागि खेल्ने आफ्नो फुटबल क्यारियर सुरु गरे।
Olivier Giroud क्यारियर शुरू
उहाँले 13 को उमेर मा व्यावसायिक क्लब ग्रेनाउले मा शामिल हुनुभन्दा पहिले क्लब मा6वर्ष प्रशिक्षण गरे।
रोमेनलाई के भयो भनेर देखा पर्यो, र तेस्रो स्तरीयमा आइस्ट्रेसको ऋणमा पठाइयो, यो एक दबाइ-पछाडि थियो जब उनको क्लबले बिक्रीको लागि राखेको थियो, र भन्छ कि उनको कुलीन संग खेल्ने गुणहरू थिएनन्।
ओलिभर गिरोद धेरै डरलाग्दो थियो। तिनका शब्दहरूमा ...। "मलाई निचो लीग पुन: सुरू गर्न एउटा जोखिम लिनु थियो," उनले भन्छन्। "तर मैले कहिल्यै त्यागेँ।"
ओलीवियरले उनको दुखाइलाई अँगालो लगाए र यसको गर्व र उत्पादनको अंश बनायो। उहाँले आफूलाई एक्सेल गर्न धकेल्नुभयो।
उहाँ पछि 2008 मा टूरहरू सामेल हुनुभयो। टूर मा आफ्नो दोस्रो सीजनमा, उनी 21 लक्ष्यहरु संग विभाजन को शीर्ष स्कोरर थिए। उनीहरूलाई शीर्ष-फ्लाइट साइड मन्टपेलीयरमा पुग्ने।
युवा Olivier Giroud- करियर स्टोरी
जिराद फेरि 21 लक्ष्यहरु संग 2011 लक्ष्यहरु वाला शीर्ष स्कोरर थिए। 12-1 सीजन मा उनको पहिलो लीग एक्सएनमक्स खिताब को क्लब ले आर्सेनल मा जाने देखि पहिले। बाबाले सधैंको रूपमा भनेका छन्, उनीहरूको घर होसरी को पालना गरे।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
रिपोर्टहरूले प्रकट गरेको छ कि ओलिभर गिरोद औसत परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछ। उनको पिता र आमाको बारेमा सानो थाहा छ किनकी तिनीहरूले पुरा तरिकाले मिडियाबाट टाढा रहन निर्णय गरेका छन्।
भाइरस: पहिले नै भनिएको, ओलिभियरको एक ठूलो भाइ हो, रोमेन, जो फुटबलर थिए। उनले एक्सर एकेडेमीमा खेलेका थिए र फ्रान्स को अन्तर्गत 15 र अन्तर्गत 17 स्तरमा प्रतिनिधित्व गरे। थियरिरी हेनरी, David Trezeguet र निकोलस अनेलका, तर समाप्त गर्न एक संभावित व्यावसायिक क्यारियर छोड्न र एक पोषण विशेषज्ञ बनने समाप्त भयो।
ओलिभर सम्झन्छन्। "उनी एक्क्सेरियरमा प्रशिक्षित भए, तिनी एक आशा थियो, तर तिनले व्यावसायिक क्यारियर कहिल्यै पाएनन्"। रोमन फेरि अध्ययन गर्न गए, र पोषण विशेषज्ञ बने।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
गिरोद जेनिफरसँग विवाह गरिएको छ 2011 बाट।
ओलिभर Giroud र पत्नी जेनिफर
उनीहरूका छोरी जेड जून 18, 2013 मा जन्मिएको थियो।
ओलिभरको छोरी, जेड गिरोदले आमाबाबुलाई कस्तो महसुस गर्नसक्ने महसुस गर्न आफ्नो पिता बनायो। ओलिभर गिराद जसले बच्चाहरु लाई कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएन, उनको शिशु बच्चाको शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक र बौद्धिक विकासलाई बढावा गर्न र समर्थन गर्न बढी समय लाग्न थाल्छ।
नोभेम्बर 2015, ओलिभर र जेनिफर Giroud लन्डनमा ग्लोबल गिफ्ट गला को लाल कालीन मा जेनिफर गर्भावस्थालाई औपचारिक बनाउनुहोस्। मार्च7मा, 2016, जेनिफरले इवान नाउँ गरेकी एक बच्चालाई जन्म दिन्छ। Giroud आफ्नो छोरा को लागि आफ्नो लक्ष्य समर्पित, ईवान जसको त्यो धेरै शौक छ।
अक्टोबर 2017 मा, जोडीले तेस्रो बच्चाको अपेक्षा गर्दै थिए।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -स्क्यान्डल
2014 फेब्रुअरीमा, एक घोडाले ओलिभर गिरोदको चित्रलाई घृणा गर्यो। यसमा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रमा फोटोहरू सम्झौताको प्रकाशन समावेश छ सूर्य। यो तस्वीर एक अधोवस्त्र मोडेल, ओलीवियर गिरोड र सेलिया केक को बीच एक विवाहित सम्बन्ध प्रकट गर्दछ।
त्यसै गरी, फेब्रुअरी 2014 मा, गिरोद ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी मॉडल मॉडल Celia के साथ धोखा दिया।
घटना पछि, उनले आफ्नी पत्नीलाई माफी जारी गरे तर पछि जोर गरे कि तिनले व्यभिचार गरेनन्। Wenger ले यस कुरामा टिप्पणी गरेन कि उनीहरु चाहन्थे "उनको गोपनीयताको सम्मान"।
सेलिया क्यानले उनको समय सोशल मिडियामा आलोचकहरूको जवाफ दिन सकेन।
गिरिद र उनको पत्नी दुवै कारण बसे र उनको तलाकको बारेमा कुनै जानकारी थिएन।
Raheem Sterling, एडिंसन काभनी र एंथोनी मार्शल Olivier जस्तै धोखाधडी घोटाला मा संलग्न भएको छ।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -हतारोपन
Giroud मा एक प्रतिष्ठा छ फ्रान्स एक मनपर्दो र सुन्दर चरित्रको लागी। 2014 मा, उहाँ अनुहार हुनुभयो ह्यूगो बोसको बोतल बोतल पुरुषहरूको सुगन्ध।
फरवरी मा 2015 Giroud को 'हॉटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर' मा मतदान गरे। संग एक साक्षात्कार मा GQ, उनले उद्धृत गरे डेविड बेखम उनीहरूले देख्नुभएको बाटोको लागि प्रेरणाको रूपमा, बेकखमको कुरा गर्दै "शैली अज्ञात छ" #:।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -धर्म
Giroud एक क्याथोलिक हो र यसको लागी आफ्नो दाहिने हातमा भजन 23 बाट लैटिनमा एक ट्याटू छ: "डोमिनस र मलाई एकदम सही छ" ("मेरो गोठालो भगवान हो, म चाहँदैनु")।
उहाँले आफैले वर्णन गर्नुभएको छ "धेरै विश्वासी व्यक्ति [...] म आफ्नो खेल गर्नुअघि आफैलाई पार नगर्ने तर म मेरो हृदयमा सानो प्रार्थना गर्दछु"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -Koscielny संग Bromance
Giroud र Koscielny टूर एफसी मा 2008-09 सिजन मा टोलीहरु थिए। तिनीहरू एक अविवाहित जोडी हुन् जुन सँधै ड्रेसिंग रूम, बस, टीम फोटोहरू, प्रशिक्षण, टेनिस र रातभरको खानामा पनि सँगै हुन्छन्। आर्सेसनल को लागी उनको कदम सुरक्षित गरे पछि, गिरोह ले भन्यो कि आर्सेनल एक महान फ्रान्सीसी कोच संग एक अद्भुत क्लब हो, र उनको भाई "LoLo" त्यहाँ पनि खेलिरहेको छ।
Koscielny पनि भनिन्छ "बोसीसीली" or "कोस बास," उनको टोली साथी र प्रशंसकहरू बीच।
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बजाउने शैली
Giroud धेरै आक्रामक पदहरूमा खेल्न सक्षम छ, तर सामान्यतया स्ट्राइकर वा केन्द्र अग्रगामीको रूपमा खेल्छ। उहाँ कहिलेकाहीं एक दोस्रो स्ट्राइकरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। एक कडा कामदार स्ट्राइकर, उनी विशेष रूपमा उनीहरूको विश्वसनीय लक्ष्य स्कोरिङ दर, आकार, शक्ति, हेडिंग सटीकता, शक्तिशाली शट, लक्ष्यमा फिर्ताको साथ ब्याक अप गर्ने क्षमता, र लिङ्क-अप प्लेको लागि जानिन्छ। उहाँ पनि अगाडि बढ्नुभन्दा अघिल्लो पदमा दौडिरहनु भएको छ
ओलिभर गिराउको अविश्वसनीय 'बिस्कुट किक ' को लागि एक प्रतियोगी थियो 2016 / 2017 सिजनको लक्ष्य।
यदि तपाईं संख्याहरु द्वारा Giroud के क्यारियर को समीक्षा गर्नुहोस, तपाईं पाएंगे कि Giroud लगातार आफ्नो पछिल्लो क्लब मा बिना कुनै गंभीर चोट ले बंद बिना खेलिन्छ। तपाईंसँग डीएनए को छ पार्क Ji-Sung, डिर्क कुयट र एक ओक्स (जनावर, होइन ओक्सलेड-चम्बेर्लेन) यो फिटनेस स्तर संग रहन को लागि।
शब्दावलीको फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड 2012 मा गनर्समा सामेल हुन मनपर्ने प्रशंसक बने। धेरै प्रशंसकहरूले आफ्नो बाल शैली अनुकरण गरेका छन्। केही तल बच्चा जस्तै समस्यामा छ।
नौ वर्षीय छोरा एक पटक कक्षा कोठाबाट प्रतिबन्धित भएको थियो किनकी उसले आर्सेलियन स्टार ओलिभेर गिउद जस्तै उनको कपाल काट्यो।
डेनी पड्डी आँसुमा घर पठाइएको थियो उनको नयाँ छोटो, पछाडी र पक्षी कपालले स्कूल नियमहरू उल्लंघन गरे पछि भन्नुभयो।
उनको आमा, साराले उनलाई लाइटन बज्जर्ड, बेडोफोर्डशायरको सम्पूर्ण ब्रुक्सल्स मिडिल स्कूलबाट बाहिर फर्के। आमा-को-दुई सारा, 33 ले विद्यालयलाई सामग्रीको लागि सोध्नुपर्दछ ताकि उसले डिनलाई घरबाट टाउको हल नगरेसम्म ट्यूटोर गर्न सक्छ।
उनले भनिन्: "हामी साँच्चै सोचेनन् डैनीको जस्तै कपाल कपाल नियम तोड्दै थियो। जबसम्म बच्चाहरूले उनीहरूको स्कूल वर्दीमा सही रूपमा पहन्छन् र स्कूलमा कडा मेहनती गर्छन्, म वास्तवमा यो कुरा के देख्न सक्दैन कि समस्या के हो। म धेरैजसो निश्चित रूपले खडा हुनेछैन र तिनीहरूलाई हेर्छु कि मेरो छोराले बहिष्कृत जस्तो महसुस गर्छ र त्यसलाई पाठबाट अलग पार्दछ। मैले सोचेँ कि हामी हाम्रो दिमागमा र हाम्रो कपाल संग सोच्न सक्दछौं, तर स्पष्ट रूपले होइन। "
तथापि, हेडटेकचर स्टीवन हरिंगटन-विलियमले स्कूलको अवस्थालाई बचाए। उसले भन्यो: "के भयो, उनी स्कूलमा आइपुगिए र ओलिभर गिरोद जस्तै शेर्पाको कपालको ठूलो भाग थियो। बाँकी लामो समयसम्म यो खोप लाग्ने थियो। हामी स्कूलमा यस्तो कपाल कचौरा आशा गर्दैनौं। "
पछि डेनी पदी पछि उनको ओल्लियर गिरोद को बाल शैली र स्कूल बालबालिका को लागि केश विनियमों मा एक पाठ सत्र पछि पछि को सम्झना हो।